Ny fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Inona avy ireo rindranasa 10 tsara indrindra ho an'ny Android
alexis martinez | | Fampiharana Android
Vaovao amin'ny tontolon'ny Android ve ianao ary tsy fantatrao izay rindranasa hapetraka ao amin'ny fitaovanao mba hahazoana tombony betsaka amin'izany? Hanampy anao kely izahay amin'ny filazàna izay heverinay fa Fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny Android. Miroborobo ny rafitra fiasan'i Google ho an'ny fitaovana finday, mihabetsaka ny fampiharana azontsika jerena ao amin'ny Google Play izay ilain'ny maro amin'izy ireo.
Androany dia hiresaka aminao marina momba izany izahay, momba ireo rindranasa tsara indrindra ho an'ity rafitra fiasa ity. Araka ny ho takatrao, misy rindranasa an'arivony maro ho an'ny sokajy rehetra azontsika sintonina, ka azo antoka fa tsy mifanaraka ny hevitray sy ny anao noho ny fifaninanana goavana amin'ny fampiharana misy ankehitriny. Nanao lisitra iray izahay miankina amin'ny fampiasana fa fototra ataon'ny mpampiasa amin'ny finday avo lenta na ny takelaka misy azy ireo, noho izany dia hiresaka momba ny mpizaha tranonkala izahay, fampiharana fanovana sary, fakan-tsary, fitendry, fitantanana mailaka, fandefasan-kafatra sns, sns. Mino izahay fa tsara toa ny hafa ny safidinay, ka tsy mila adim-potoana intsony, andao Andao hojerentsika izay rindranasa tsara indrindra ho an'ny finday.
Io no tranokalan'ny tranonkala tsara indrindra ary koa raha mampiasa Chrome amin'ny fitaovana hafa ny mpampiasa, afaka misokatra ny session amin'ny fitaovany tsirairay ary manohy mizaha na inona na inona pejy sy fitaovana manao izany.
Manohy amin'ny rindranasa vita ao amin'ny Google izahay, ary avy amin'ny GMail dia manana safidy izahay afaka manamboatra mailaka avy amin'ny serivisy hafa ankoatr'i Google. Ka afaka manana ny kaontintsika manokana, ny asa, ny kaontintsika ho an'ny namana sns ... amin'ny fampiharana iray sy amin'ny fomba tena voalamina isika.
Tsy azonao hadino ny fampiharana mpanjakavavy fandefasana hafatra eo noho eo. Ny tena isan-jaton'ny mponina dia mampiasa an'io rindranasa io mba hifandraisana amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra, fizarana sary, horonan-tsary, toerana, naoty an-tariby ary antso an-tariby aza.
Ny fahatsorany sy ny sehatry ny mpampiasa mavitrika dia nahatonga an'ity fampiharana ity ho tonga lafatra amin'ny fakana sary sy fanomezana azy ho majika amin'ny vokany avy. Instagram dia nahatonga ny sary nalaontsika ho tsara.
Manohy ny fizarana sary ary miankina amin'ny fitaovanao, misy ny fakantsary fakantsary izay tsara kokoa noho izy ireo manome antsika fiasa bebe kokoa amin'ity lafiny ity, toy ny Camera360 Ultimate. Miaraka amin'ny interface tsy mitovy amin'ny mahazatra antsika dia afaka manatanteraka effets isika alohan'ny maka ny sary, toy ny fanitsiana izay toerana misy antsika ahafahantsika maka sary toa ny fakan-tsary.
Ny mpanampy manokana an'i Google angamba no fampiharana feno indrindra afaka kelikely. Afaka mangataka izay rehetra havalin'i Google antsika haingana sy mahomby isika ao. Toy ny hoe manana rakipahalalana eo am-pelatananao. Fa ankoatr'izay, ity fampiharana ity dia hilaza amintsika rehefa manam-potoana mandra-piasa isika, dia hitarika ireo toerana hitsidihana, hisakafoanana, hanondro ny toetr'andro, izay vaovao mahaliana azontsika vakiana, fampahatsiahivana momba ny dia, izay toerana nijanonantsika ny fiara, naoty na zavatra hafa izay tonga ao an-tsainao, izany rehetra izany sy ny maro hafa dia Google Now. Mpanampy manokana iray manontolo ao amin'ny felatananay.
Fampiharana iray hafa natao tao amin'ny Google ary tsy azo hadino ity fampiharana ity hahafantatra hoe aiza no toerana halehantsika manaraka, inona ny manodidina azy, izay lalana tokony halehantsika, fitetezana GPS, fampandrenesana lozam-pifamoivoizana, asan-dàlana ary snsetera lava, izy ireo no lasa Fampiharana sarintany misy tsara indrindra ho an'ny Android.
Fampiharana tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa atletika. Ity rindrambaiko ity dia ahafahantsika manana ny fampahalalana rehetra momba azy io rehefa mivoaka mitsangatsangana, mihazakazaka, lalan'ny bisikileta na fanatanjahan-tena hafa izahay. Hanamarika ny halaviran'ny dia amin'ny sari-tany manome antsipiriany momba ny làlana, ny hafainganam-pandehantsika, ny kilometatra nolalovana sns ... afaka mizara ny fanazaran-tena nataontsika tamin'ny namantsika ary koa afaka mamaky izany amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra ary ny sary nalaina nandritra ny fotoana nanatanjahan-tena.
Azontsika ampidirina eto koa ny Google Drive satria ny serivisy roa dia manome antsika fiasa mitovy, mitahiry antontan-taratasy ao anaty rahona manokana. Ny rahona dia tonga lafatra mba hizara amin'ireo namantsika na mpiara-miasa amintsika ireo antontan-taratasy hitantsika fa mety, toy ny sary nalainay, ny anjaran'ny oniversite na izay tiantsika rehetra.
Tsy ho diso ilay fampiasa fampiharana ho an'ny atiny video. Ao amin'ity sehatra ity no ahitantsika fantsona an-tapitrisany amin'ny lohahevitra rehetra misy atiny hampahafantarana antsika, hanabeana antsika, hamerenana, hahalala zavatra… Tsy isalasalana fa nanamarika ny YouTube tamin'ny fialamboly taloha sy taorian'ny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Inona avy ireo rindranasa 10 tsara indrindra ho an'ny Android
Nova Launcher 4.0 dia misy ao amin'ny Play Store miaraka amin'ny fanavaozana tanteraka ny Material Design
Ahoana no fanapahana Trivia Crack